Hardware အား စတင်လေ့လာခြင်း - Page5- မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
Hardware အား စတင်လေ့လာခြင်း
ပြန်စာ - Hardware အား စတင်လေ့လာခြင်း
ကျနော်က Hardwar နဲ Network ပိုင်းကို သေချာလေးလေ့လာချင်ပါတယ်၊
နောက်ပြီး ကျနော်က အင်တာနက်ဆိုင်ဖွင့်ထားပါတယ်
ဘာမှမတက်တော့ တခုခုဆို ဆားဗစ်ဆရာခေါ်ခေါ်နေရတာ အကြာင်းမဟုတ်ပေမဲ့ သူကမအားလို့ မလာနိုင်တဲ့ အခါကြရင် ဆိုင်ကိုတောင်ပိတ်ထားရဘူးပါတယ် အဲဒါကြောင့် ဘယ်စာအုပ်လေးတွေ ကိုတော့ ဒေါင်းပြီးဖတ်သင့်တယ် ဘယ်လိုလုပ်သင့်တယ် ဆိုတာမျိုးလေးက်ိုပြောပြပေးစေလိုပါတယ်
Shin Thant ထံသို့စာချွန်လွှာပို့ရန်
Find More Posts by Shin Thant
အစ်ကိုရေ့... ဒီတော့ပစ်လေးရဲ့ အစဆုံး စာမျက်နှာလေးကိုစဖတ်လေဗျာ... တော်တော်ကောင်းတယ်... ကျွန်တော်လည်း ဒီကနေပဲ လေ့လာတာလေ... ဘယ်စာအုပ်ကိုစဖတ်ရမယ် ဘယ်ခွေလေးတွေကို စလေ့လာရမယ်ဆိုတာကို ရှင်းပြထားသလို လိုအပ်တာတွေကိုလည်းတင်ထားပေးတယ်လေ... ကောင်းဒလယ်ဗျာ.... ခက်ခဲနေရင် အောက်လင့်ကဝင်လိုက်လေ...နော်...
အောက်ပါအသင်းဝင်5ဦးတို့မှ ခွန်ညီး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
aungphyo, bonge, phoetharlay, putty, thadoe
ကျတော်က how to build aPC.vcd ဖိုိုင်ကို extract လုပ်တော့ လဲ error တက်နေတယ်အကို..
နောက်ပြီး virtual drive set.up ကို Run တော့လဲ အဆင်မပြေဘူးအကို...
name...organization..serial ဆိုပြီး တောင်းနေတယ်အကို
အဲဒါလေးကို အကီုအချိန်အားမယ်ဆိုရင် ညီကို ရှင်းပြပေးစေချင်ပါတယ်...
အကိုအချိန်ရမယ်ဆိုရင် ပုံလေးနဲတကွ ရှင်းပြပေးစေချင်ပါတယ်အကို.....
တက်တူး(t@t tO_o) ထံသို့စာချွန်လွှာပို့ရန်
Find More Posts by တက်တူး(t@t tO_o)
Originally Posted by တက်တူး(t@t tO_o)
extract လုပ်တော့ error တက်နေတယ်ဆိုတာ ဘယ်လို error လဲ။
password မှားတယ်ပြောတာလား။ file corrupt လို့ပြောလား သေချာလေးပြောပေးပါ။
password ထည့်တဲ့အခါ copy ကူးမထည့်ဘဲ ရိုက်ထည့်ကြည့်ပါ။
ဒေါင်းထားတာ file size ပြည့်ရဲ့လားလည်း ပြန်ကြည့်ပါ။
virtual drive က ဒီက နေ ဒေါင်းထာထင်တယ်။
အထဲမှာ keygen ပါတယ်လေ။ အဲဒါကို generate လုပ်ပြီး ရလာတဲ့ key ကို serial တောင်းရင်ထည့်ပေးလိုက်။
name , organization တွေက တစ်ခုခုထည့်ပေးလိုက်လို့ ရပါတယ်။
တက်တူး(t@t tO_o), Aung Aung, bonge, phoetharlay, phyomyintthein
VirtualDrive ကတော့ အဆင်ပြေသွားပါတယ်အမ...Keygen ပါတာကို မသိလို့... အမပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်လိုက်တာ အိုကေသွားပါတယ်...တစ်ကူးတစ်က ဖြေပေးသွားတဲ့အတွက်လဲ ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်...
ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျုတာတပ်ဆင်နည်းက extract လုပ်တော့ file corrupt ဖြစ်နေတယ်... file တွေကို ဖြည့်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်...ကျွန်တော်က Mediafire ကဒေါင့်တာပါ...ဒေါင်းထားတာ file size လဲပြည့်ပါတယ်....ဘာဖြစ်လဲ သိပါဘူး...ကူညီပါအုံး....
mediafire ကနေဒေါင်းပြီး ဖြည်ကြည့်တာ အားလုံးဖြည်လို့ရပါတယ်။
ဘာ error မှမတက်ပါဘူး။
error တက်တဲ့အပိုင်းကို အသစ်ပြန်ဒေါင်းပြီး ပြန်ဖြည်ကြည့်ပါလား။
အောက်ကလင့်ခ်မှာလည်း download center လင့်ခ်တွေ ရှိပါတယ်။
အဆင်မပြေရင် ပြောင်းပြီး ဒေါင်းကြည့်ပေါ့။
တက်တူး(t@t tO_o), ဖြိုးယံလေး, aungphyo, phyomyintthein
ကျွန်တော်လည်း ညတုန်းက ပြန်ချပြီး ဆက်ကြည့်တာ အဆင်ပြေပါတယ်။ ပြန်ပြောဖို့ မအားတာနဲ့ မနက်မှပဲ ပိုဒ့်တင်နိုင်တော့တယ်။ ဖြစ်နိုင်တာကဒေါင်းလော့ချစဉ်၊ အင်တာနက်ကြောင့်၊ ဖိုင်အပြည့် မပါတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အမတူးတူး ပေးထားတဲ့ ဖိုရမ်ကဒေါင်းလော့ချလို့ရရင်ချပါ၊ မရခဲ့ရင်တော့ အောက်မှာ လေးနေရာက တင်ပေးထားတယ်။ ဖိုင်ကိုလည်း 50 MB စီ၊ HJ နဲ့ဖြတ်တင်ပေးထားပါတယ်။
အမတူးတူးရေ အခုကျွန်တော်တင်ပေးထားတဲ့ လင့်လေးတွေကို သူရဲ့သက်ဆိုင်ရာပိုဒ့်ထဲကို ပေါင်းထည့်ပေးလို့ရရင်ထည့်ပေးပါခင်ဗျာ။ Mediafire လင့်ခ်နဲ့အဆင်မပြေတဲ့၊ ချမရတဲ့ ဖိုရမ်မောင်နှမများအဆင်ပြေသွားအောင်လို့ပါ။အမှားပါရင်ခွင့်လွှတ်ပါ။
တက်တူး(t@t tO_o), phoetharlay, phyomyintthein, tu tu, yawnathan
ဟူးးးးးးးးးးးးးးးး.မသူသူတင်ပေးလိုက်တဲ လင့်နဲ့မှဘဲ အဆင်ပြေတော့တယ်...
တည်နေရာ: Nay Pyi Taw , Ela
ပို့စ် 12 ခုအတွက် 46 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
အစ်ကိုတို့ရေ.. ညီ ဟိုကောင်ကိုဒေါင်းတာ မရဘူး. ကွန်ပျူတာကို ဘယ်လို တပ်ဆင်မလဲ ဆိုတဲ့ စာအုပ်လေ..ညီ.. အဲဒါကို တအားဖတ်ချင်နေလို့.. ဖြစ်နိုင်ရင် ညီ့ဆီကို မေးလ်ပို့ပေးပါလားခင်ဗျာ... ညီမေးလ်က aungthuwinn09@gmail.com ပါ.. ကျေးဇူးတင်နေပါတယ်. အားလုံးကို..လေးစားလျှက်...ဖြစ်နိုင်ရင် စာအုပ်တွေ အားလုံးကို လိုချင်တယ်.. ခုက တစ်ခုမှ ဒေါင်းရတာ အဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတယ်.. ညီ့ဆီကိုကြုံရင်. အဲဒီစာအုပ်လေးတွေ ပို့ပေးပါနော်...
အောင်သူဝင်း ( ရဲထက်သာ )
( လေ့လာစ )
Find More Posts by ရဲထက်သာ
31-08-2010, 03:15 PM
ပို့စ် 70 ခုအတွက် 325 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကွန်ပျူတာ တပ်ဆင်နည်းကိုတော့ သိသလောက်တော့ ရေးချပေးထားတယ် အစ်ကိုအစ်မ များ အောက်ကလင့်မှာ ဖတ်ရူနိုင်ပါတယ်
အောက်ပါအသင်းဝင်6ဦးတို့မှ အေးမင်းအောင် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
aungphyo, bonge, minthike, phoetharlay, phyomyintthein, tu tu
Find More Posts by အေးမင်းအောင်
အစ်မ က ခုမှ ကွန်ပျူတာကို စတင်လေ့လာမလို့ပါကွယ်
အမ ဖိုင်ကို download လုပ်ပြီးပြီ rar ဖြည်လိုက်ရင်
Unexpected end of archiive ဆိုပြီး message ပေါ်လာပြီး rar ဖြည်လို့ မရဘူး ဖြစ်နေတယ်
ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတာ ပြောပြပေးပါဦးနော်
Originally Posted by phyomyintthein
Hardware ကို စတင်လေ့လာချင်သူများ/ စတင်လေ့လာနေသူများအတွက်သာ ရည်ရွယ်ရေးသားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Last edited by Aung Aung; 27-09-2010 at 07:28 PM..
Find More Posts by diamondkhin
Originally Posted by diamondkhin
အမရေ link က အလုပ်လုပ်ပါသေးတယ်။ ကျွန်တော် download လုပ်ပြီး စမ်းကြည့်ပြီးပါပြီ။ အားလုံး အဆင်ပြေပါတယ်။
ဆိုတဲ့ Password ကို ရိုက်ထည့်ပါ။ ဆိုလိုတာက copy လုပ်ပြီး password တောင်းတဲ့ နေရာမှာ paste လုပ်ရင် အမပြောသလို error ပေးတတ်ပါတယ်။
စာလုံးပေါင်း (အသေး/အကြီးတွေ)ကိုလည်း မမှားပါစေနဲ့
password အားလုံး မှန်ရဲ့သားနဲ့ error ပြနေတုန်းဘဲဆိုရင်တော့ ပြန်ပြီး download လုပ်ပါ။ internet connection ကြောင့် ဖိုင်ပျက်နေတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အမ အဆင်ပြေပြေနဲ့ လေ့လာနိုင်ပါစေ။
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ phyomyintthein အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
aungphyo, hellboy, ko myo, minthike
ပို့စ် 32 ခုအတွက် 112 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
Hello.exe file ကို double-click ပေးလိုက်တာနဲ့ လေ့လာလို့ရပါပြီ။ တစ်ချို့  သင်ခန်းစာတွေမှာ အသံနှင့် သင်ကြားပေးပါတယ်။ တစ်ချို့ ကိုတော့ ကိုယ်တိုင်လိုက်ဖတ်ရပါတယ်။ အကြံပြုချင်တာကတော့ ဒီအခွေကို ၅ ခေါက်ထက်မနည်း နားထောင်။ဖတ်သင့်တယ်။ နားရည်ဝနေအောင်လို့ပါ။
adobe reader9ပါ...ကျွန်တော်ဖတ်ဖို့ဘာ reader နဲ့ ဘာ player လိုလဲဆိုတာသိချင်ပါတယ်....ဘာဆိုဘာမှမသိသေးလို့ပါ...
Last edited by htoo war; 06-02-2011 at 12:17 PM..
htoo war ထံသို့စာချွန်လွှာပို့ရန်
Find More Posts by htoo war
ပို့စ်5ခုအတွက် 14 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ဲပြန်ဖြည်တဲ့အခါ password တောင်းနေပါသည် ဘယ်ဟာကိုထည့်သွင်းရမည်မသိပါ ကူညီပါဦး
Find More Posts by မင်းနေသွေး
Originally Posted by htoo war
ဘာ player မှ မလိုအပ်ပါဘူး။ http://www.myanmarfamily.org/forum/s...3&postcount=29 နဲ့ http://www.myanmarfamily.org/forum/s...&postcount=101 မှာ ကိုhtoo war တွေ့တဲ့ အခက်အခဲလိုမျိုး ဖြစ်ခဲ့ဖူးကြပါတယ်။ ဖတ်ကြည့်ပေးပါ။
Originally Posted by မင်းနေသွေး
WWW.Myanmarfamily.Org ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ မရသေးဘူးဆိုရင် www.myanmarfamily.org
နဲ့စမ်းကြည့်ပါ။ Password ကို ရိုက်ထည့်ပါ။ ဆိုလိုတာက copy လုပ်ပြီး password တောင်းတဲ့ နေရာမှာ paste မလုပ်ပါနဲ့။
အောက်ပါအသင်းဝင်7ဦးတို့မှ phyomyintthein အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုစံငြိမ်း, ဇော်ရဲပိုင်, aungphyo, bonge, htoo war, KznT, minthike
[size="3"]ဒီစာအုပ်ကိုတော့ နောက်ပိုင်း အေးအေးဆေးဆေးကြမှ ဖတ်စေချင်ပါတယ်။ hardware ပစ္စည်း အသစ်အကြောင်းတွေပါ ပါလို့ အခြေခံ အကြောင်းအရာတွေ မသိသေးဘဲ အစောတလျင်ဖတ်ရင် ရှူပ်မှာစိုးလို့ နောက်ပိုင်းကြမှ ဖတ်ဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။ ပထမပိုင်းနှင့် တစ်တွဲတည်းဖြစ်အောင်လို့သာ အရင် တင်ပေးလိုက်တာပါ။
စာရေးသူ ဆရာဦးဇော်လင်းရဲ့  အမှာစာကို အမြည်းသဘောထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ သဘောတွေ့မှ download ချပါ။
့frist of all want to thank you all for sharing the book A+ hardware assential. could anyone help me pls, everytime i download complete but i can't open it with Adobe reader,,,
Last edited by phyomyintthein; 13-10-2011 at 11:33 AM.. Reason: quote ပြင်ရန်
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ tayawdaw အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by tayawdaw
13-10-2011, 10:42 AM
everytime i download complete but i can't open it with Adobe reader,,,
any error msg or screen shots?
have u try with other pdf viewer b4?
Last edited by minthike; 13-10-2011 at 10:52 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင်5ဦးတို့မှ minthike အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
စနိုးလေး, ဆွိ, မေမင်းဆက်(ပုသိမ်မြေ), bagothar85, phyomyintthein
Originally Posted by tayawdaw
စနိုးစမ်းကြည့်တာတော့ ဖတ်လို့ရပါတယ် pdf ဖိုင်မှာတော့ ပြဿနာမရှိပါဘူး adobe reader က အဆင်မပြေတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ် စနိုး pdf ဖိုင်ဖတ်ဖို့ foxit နဲ့ nitro လေးတင်ပေးလိုက်တယ်နော် အဆင်ပြေပါစေရှင် ခင်မင်လျှက် စနိုးလေး
Last edited by စနိုးလေး; 13-10-2011 at 06:44 PM..
ဆွိ, မောင်ပေါ်ဦး, မြန်အောင်သား, aungphyo, bagothar85, bonge, minthike, phyomyintthein, putty
21-06-2013, 05:19 PM
Originally Posted by ကိုကာမစ်
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော် ကိုဖြိုးမြင့်သိန်း တင်ပေးထားတဲ့ စာအုပ်တွေကို ဒေါင်းလုတ် ဆွဲရတာ ပိုပြီးအဆင်ပြေအောင် compress လုပ် ပြီးတော့ ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
1. A Plus (U Zaw Linn) (26,8 MB)
2.Beyond A+ (24,5MB)
3.Teach Yourself The Best Technology and Repairing PCs(U Aye Ko Ko - B.E(Electronics)) (28,8MB)
အဲဒီက A Plus(u zaw linn) ကဒေါင်းမရတော့လို့
လုပ်ပါအုံးအစ်ကိုတို့ရေ။ ကျွန်တော် လိုချင်လို့ပါ။
Teach Yourself The Best Technology and Repairing PCs(U Aye Ko Ko - B.E(Electronics)) လေးလဲ ပြန်တင်ပေးပါအုံးခင်ဗျာ
download center မှာ သွားဒေါင်းလိုက်ပါ။
ဆွိ, လီယိုနာဒို, PyaitSone
26-06-2013, 02:09 PM
ကိုဖြိုးမြင့်သိန်း ရေ ကျေးဇူးပါပဲဗျာ ... အခုလိုမျှဝေပေးတဲ့အတွက် အများကြီးသိလာပါတယ်
ဒါနဲ့အစ်ကို ကျွန်တော် CPU အကြောင်း လေး သိချင်ပါတယ် ခုသူများတွေပြောပြောနေတဲ့ Dual Core , I3 ,I5 ,I7 တွေ ဘယ်လိုကွာတယ်ဆိုတာလေး ပြောပြပေးပါလားခဗျာ ... ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Find More Posts by FollowITBoy
26-06-2013, 06:23 PM
Originally Posted by FollowITBoy
ကျွန်တော် CPU အကြောင်း လေး သိချင်ပါတယ် ခုသူများတွေပြောပြောနေတဲ့ Dual Core , I3 ,I5 ,I7 တွေ ဘယ်လိုကွာတယ်ဆိုတာလေး ပြောပြပေးပါလားခဗျာ ... ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ပြန်စာ - Processor ၊ Motherboard နဲ့ RAM ကို ကိုက်အောင် တွက်ချက်
Processor ၊ Motherboard နဲ့ RAM ကို ကိုက်အောင် တွက်ချက် ၀ယ်ယူခြင်း(၃)
၁။ RAM အတွက် Dual channel modeကို support လုပ်ရပါမယ်။
ကျွန်တော် ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ Processor ရဲ့ bus speed က 1066MHz ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း bus speed နဲ့ ကိုက်ညီအောင် ကျွန်တော်ဟာ RAM ကို တပ်ဆင်တဲ့နေရာမှာ Dual channel mode ကိုသာ ရွေးချယ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုပြောရင် ဘာလို့လဲလို့ ကျွန်တော့်ကို ခဏခဏမေးကြပါတယ်။ ဒီလိုဗျ ….
processor ရဲ့ speed ဟာ အလွန်မြင့်မားလာနေပါပြီ။ အဆိုပါ processor များ၏ လိုအပ်သော data ကို အချိန်မှီ ပေးပို့ရန်မှာ RAM များ၏ တာဝန်ပင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော် အခုရွေးချယ်ထားသော processor သည် FSB 1066 MHz ဖြစ်သည်။ ဈေးကွက်တွင် 1066MHz ရှိသော DDR2 RAM များကို ၀ယ်ယူရရှိနိုင်သော်လည်း ဈေးမှာ လွန်စွာ ကြီးမားလှပေသည်။ နောက်တစ်ချက်ကတော့ ပစ္စည်း ရှားချင်ပင်ဖြစ်သည်။ ဈေးကွက်တွင် ပေါပေါများများနဲ့ ဈေးသက်သက်သာသာရသော 533MHz ရှိ DDR2 RAM ကို သုံးပါမယ်။ ထိုအခါ memory မှ ထောက်ပံ့နိုင်သော data ပမာဏမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
memory peak bandwidth = memory speed x data bit = 533 MHz x 64bit(8 byte) = 34112 M MB/s
processor မှ လိုအပ်သော data ပမာဏမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
processor peak bandwidth = memory speed x data bit = 1066 MHz x 64bit(8 byte) = 68224 M MB/s
Memory သည် processor မှ လိုအပ်သော data ပမာဏ၏ ထက်ဝက်ကိုသာ ထောက်ပံ့နိုင်ကြောင်း တွေ့ရသည်။ အကယ်၍ processor လိုအပ်သော data ပမာဏကို memory မှ မထောက်ပံ့နိုင်ပါက system တစ်ခုလုံး၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ကျဆင်းစေပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုသာဆိုရင် ကျွန်တော့်တို့ ဈေးကြီးပေးဝယ်ထားသော processor ကို လဲမလား? ဒါမှမဟုတ် ဈေးကြီးပြီး ရှားသော RAM ကို ရှာဖွေ ၀ယ်ယူမလား? ကျွန်တော့်ဆီမှာ ထွက်ပေါက်ရှိပါသေးတယ်။ အဲဒါကတော့ စောစောက ကျွန်တော်သုံးခဲ့တဲ့ (တွက်ပြခဲ့တဲ့) single channel mode အစား dual channel mode ကို အစားထိုးအသုံးပြုပါမယ်။ ထိုအခါ memory မှ ထောက်ပံ့နိုင်သော data ပမာဏမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
memory peak bandwidth = memory speed x data bit x channel = 533 MHz x 64bit(8 byte) x2= 68224 M MB/s
dual channel mode ကို အသုံးပြုသောအခါ memory သည် processor မှ လိုအပ်သော data ပမာဏကို ထောက်ပံ့နိုင်ကြောင်း တွေ့ရသည်။ dual channel mode ကို အသုံးပြုသောအခါ စောစောကပြောခဲ့သလို speed ကို ဦးစားပေးရန်အတွက် ဈေးကြီးပေးဝယ်ထားသော processor ကို လဲစရာမလိုတော့သလို၊ ဈေးကြီးပြီး ရှားသော RAM ကိုလည်း ရှာဖွေဝယ်ယူရန်လည်း မလိုတော့ပါ။
၂။ RAM slot ၄ slot ပါရပါမယ်။
ကျွန်တော်ဟာ RAM ကို dual channel mode တွင် အသုံးပြုမည် ဖြစ်သောကြောင့် RAM slot ၂ ခုကို အသုံးပြုရပါလိမ့်မယ်။ တကယ်လို့ ကျွန်တော်ဟာ RAM ကို 1GB စိုက်မယ်ဆိုရင် 512MB ၂ချောင်း အသုံးပြုရပါလိမ့်မယ်။ ဒါမှလည်း dual channel mode ဖြစ်မှာကိုး။ နောင်တစ်ချိန်တွင် RAM ကို နောက်ထပ် 1GB ထပ်စိုက်ချင်တယ်ဆိုရင် 512 MB ၂ ချောင်း ထပ်စိုက်ရပါလိမ့်မယ်။ ဒါဆိုရင် အားလုံးပေါင်း RAM က 512 MB ၄ ချောင်းဖြစ်သွားပါပြီ။ တကယ်လို့ ကျွန်တော့် motherboard မှာသာ RAM slot က ၂ slot သာ ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် နောက်ထပ်တိုးမယ့် RAM 1GB အတွက် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ? အရင် စိုက်ထားတဲ့ 512MB ၂ချောင်း ဖြုတ်။ နောက်ထပ် 1GB RAM ၂ ချောင်းဝယ်ပြီး စိုက်ပေါ့။ အရင် 512MB ၂ချောင်းကတော့ ပိုသွားမှာပေါ့။
ဒီတော့ နောင်ရေးအတွက် တွေးပြီး RAM slot ၄ slot ပါသော motherboard ကိုရွေးလိုက်ကြစို့။
ပုံ(၁) RAM slot ၄ slot ပါသော motherboard ကို အပေါ်မှ မြင်ရပုံ။
အစ်ကိုရေ ကျွန်တော်မေးချင်လို့ပါ။ ကျွန်တော်က hardware နဲ့သိပ်တော့မရင်းနှီးသေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကွန်ပျူတာကိုင်တယ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနည်း စာအုပ်လေးဖတ်ဘူးပါတယ်။ အဲတော့ processor နဲ့ sockect ပတ်သတ်မှုကို သိနေပါပြီ။ ကျွန်တော်တတ်တဲ့အဆင့်လေးကို ပြောပြတာပါ။ အခုအစ်ကိုပြောတဲ့
dual channel mode သုံးလို့ရတဲ့ မားသားဘုတ်ကို ကျွန်တော်မသိဘူးဖြစ်နေတယ်။ သင်တန်းက သင်ပေးတဲ့အသိနဲ့ လေ့လာထားတဲ့အသိတွေအရ ကျွန်တော်သိတာ လေးပေါက်ပါလဲ တစ်ခုပဲသုံးရတယ်။ 1 g နှစ်ချောင်းပြိုင်ဆိုက်လို့မရဘူးလို့ပဲသိတယ်။ အစ်ကိုပြောတဲ့ motherboard ကိုဘယ်လိုဝယ်ရမလဲ။ ကျွန်တော်သိတဲ့ကွန်ပျူတာရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေမှာလည်း အဲလိုမရှိဘူး။ ကျွန်တော် စိတ်ဝင်စားတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ 1 g Ram ဆိုက်လိုက်တာနဲ့ 512 ကပစ်လိုက်ရသလိုပဲ။ 512 နှစ်ချောင်းရှိမယ်ဆိုရင် 1 g အဖြစ်ပြန်သုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ လိုချင်လို့။
ပြီးရင် အဲဒီအကြောင်းလေးလည်းရှင်းပြပေးပါအုံး ခင်ဗျာ။
hardware ebooks, hardware guide, hardware howto, hardware knowledge, hardware learning cd